Mety levona Lyophilized Silk Fibroin - China Simatech
Izany vokatra dia afaka miovaova foana ny mahery 18 volana kosa mba tany efitra mari-pana. Ny landy nateraka indray miova vahaolana ara-drafitra tetezamita fahaizany avy amin'ny kisendrasendra coil andα-helix rafitra ny β-taratasy tany am-boalohany rafitra toy ny landy vahaolana.
Zavatra Name: Hivaingana-maina landy fibroin
Large molekiolan'ny lanja landy fibroin in aqueous vahaolana azo tsinjaraina ho samy hafa endrika mafy ara-nofo. Indrisy anefa, ny landy voadio vahaolana tsy azo tehirizina, na taterina nandritra ny fotoana ela toy ny landy sy ny fiovana ara-drafitra misy mijaly noho ny thermodynamic aggregates fikorontanana. Ny format manan-tompo lyophilized vokatra landy hamaha tanteraka ireo olana ireo sy ny lyophilized landy dia afaka ho levona ao anaty rano, na buffer amin'ny avo fitanan'i, fanamorana ambany fanodinana ara-nofo.
Lyophilized landy eo amin'ny fitaratra izy tavoahangy manolotra ho fotsy porous sponjy. Koa satria ny tavoara feno tanteraka voaisy tombo-kase, lyophilized landy afaka mijanona miovaova mandritra ny fotoana lava be (> 18 volana) ao amin'ny efitrano mari-pana eo amin'ny tarehy, solubility, molekiolan'ny fizarana ny lanjany sy ny rafitra. Ny landy nateraka indray miova vahaolana ara-drafitra tetezamita fahaizany avy amin'ny kisendrasendra coil sy ny α -helix rafitra ny β -sheet rafitra toy ny landy vahaolana tany am-boalohany, izay mitsikera mafy amin'ny fanomanana ny endrika ara-nofo.
Table 1 fikirana, fanaovana fitiliana sy ny fomba lyophilized landy fibroin
Fikirana, dia naka fanahy sy Method Lyophilized Silk Fibroin
Form Lyophilized mpiasa
Method ny fitehirizana Voatahiry ao amin'ny tany karankaina, toerana ventilated amin'ny efitrano mari-pana
Vahaolana mifantoka rehefa rehydration ≤ 40%
O peration fomba:
Lyophilized fibroin landy dia azo tehirizina ao amin'ny trano mari-pana nandritra ny 18 volana. Alohan'ny fampiasana, ny rano, na buffer na sela / zava-mahadomelina vahaolana azo koa any an-mamokatra tavoahangy fitaratra mampiasa fanjaitra syringe (foana voaisy tombo-kase) na ny pipette (misokatra tavoahangy). Ny landy lyophilized mofomamy tao amin'ny siny hoditra azo haingana rehydrated fananganana fahazavana mavo vahaolana sy ny landy azo concentrations afaka hahatratra hatramin'ny 30-40%.
Same as ny vahaolana aorian'ny fanadiovana, ny mety levona lyophilized landy fibroin Azo ampiasaina ho toy ny fitaovana fototra ho an'ny FABRICATION manta maro biomedical entana. Ankoatra izany, mety levona lyophilized landy fibroin manana ny tombony sy ny Ambient intsony fitahirizana, fitaterana mora kokoa sy ambony fitanana ny nateraka indray vahaolana tsy tapaka oharina amin'ny landy fibroin vahaolana.
Previous: Ao amin'ny fiforonana Situ Silk Fibroin Gel Kits
Next: Silk Fibroin manify
Lyophilized Silk Fibroin proteinina
Lyophilized Silk Fibroin proteinina Powder
Lyophilized Silk proteinina
Lyophilized Silk proteinina Powder
Mety levona Lyophilized Silk Fibroin Powder
Mety levona Lyophilized Silk Fibroin proteinina
Mety levona Lyophilized Silk Fibroin proteinina Powder
mety levona Lyophilized Silk proteinina
Mety levona Lyophilized Silk proteinina Powder